महरा दोषी ठहर भएमा के सजाय हुन्छ ? - sambahak
Home राजनीति महरा दोषी ठहर भएमा के सजाय हुन्छ ?
महरा दोषी ठहर भएमा के सजाय हुन्छ ?
बलात्कारको प्रयासमा ३ र बलात्कार ठहर भएमा ११ वर्ष
काठमाडौं- पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा अन्तत प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन्। जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि बालुबाटार पुगेको प्रहरीले महरालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला अदालतवाट पक्राउका लागि अनुमति लिएसंगै महरामाथि अनुसन्धान प्रक्रियामा अदालत पनि जोडिएको छ। प्रहरीले महरा विरुद्ध फौजदारी अपराध संहिता अनुसार मुद्दा दायर गर्ने छ। मुद्दा दायर गर्नका लागि प्रहरीले आवश्यकता भएमा अनुमति पनि लिने छ।
महरा विरुद्ध पीडितले बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप जाहेरीमा लगाएकी छन्। बलात्कारको प्रयास वा बलत्कार कुन आधारमा मुद्दा दायर गर्ने भन्ने बारेमा महराको र पीडित दुवैको बयानपछि निर्णय हुने छ। जिल्ला सरकारी वकिलको संलग्नतामा हुने अनुसन्धानमा दुवैको बयान बलात्कारको प्रयास देखिएमा सोही अनुसार महरा विरुद्धमुद्दा दायर हुने छ। बलात्कार भएको बयान पीडित रोशनी शाहीले दिएमा प्रहरीले उनी विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दायर गर्ने छ।
बलात्कारको प्रयासमा तीन वर्ष कैद ३० हजार जरिवाना
महरालाई यौ दुब्र्यबहारमा मुद्दा दायर भएका अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद हुने देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२४ अनुसार उनीमाथि यस्तो सजाय हुने छ। मुलुकी संहिताको धारा २२४मा यौन दुव्र्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ।
बलात्कार गरेको ठहर भएमा ११ वर्ष कैद
मुलुकी फौजदारी संहिता २१९(३)को ङ को अनुसार पहिलो सजाय हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त व्यवस्थामा सात वर्षदेखि १० सम्मको सजाय हुने उल्लेख छ । महरा सभामुखको जिम्मेबारीमा रहेको र उनकै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले आरोप लगाएका संहिताको २२२ को २ पनि थप आर्कषित हुनसक्ने छ । यो आर्कषित हुने कुरा सरकारी पक्षको जिकीर , पीडितको बयान र न्यायाधीशको निर्णयमा भर पर्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्थामा आफ्नो सुरक्षा र संरक्षणमा रहेको व्यक्ति भएमा थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा महरा दोषी ठहर भएका १३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने देखिनछ ।
महरामाथी शाहीले पहिलाे दिन आफुमाथि कुटपीट गरेकाे आराेप समेत लगाएकी थिइन् । बयानका क्रममा उनले कुटपीट गरेकाे भनिन भने महरामाथी थप अर्काे अभियाेग पनि लाग्ने छ । मुलुकी अपराध संहिताकाे परिच्छेद १४ काे आराेपमा महरामाथि अनुसन्धान हुने छ । कुटपीट र अङग भङ्ग बनाएकाे आराेपमा उनीमाथि थप सजाय हुने छ । कुटपीटकाे अभियाेगमा पीडितमाथि पुगेकाे क्षतिकाे आधारमा सजाय निर्धारण हुने छ ।नेपाल लाइभ
Previous articleहनुमानढोकामा ५४ बोका र ५४ राँगाको बलि
Next articleमहरालाई हिरासतमा अक्सिजन